भारत महिलाका लागि विश्वकै असुरक्षित ठाउँ, १५ मिनेटमा एउटा बलात्कार! - शैली न्युज
भारत महिलाका लागि विश्वकै असुरक्षित ठाउँ, १५ मिनेटमा एउटा बलात्कार!
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १५:००
काठमाडौँ । सन् २०१८ मा भारतमा ३४ हजार महिला बलात्कारको शिकार भएका छन् । भारत सरकारले बिहिबार सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार औसतमा प्रत्येक १५ मिनेटमा बलात्कार सम्बन्धी एउटा उजुरी पर्ने गरेको छ । यस तथ्यांकले भारत विश्वमा महिलाका लागि सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँको रुपमा देखाएको छ ।
सन् २०१२ मा नयाँ दिल्लीमा एउटा बसमा एक महिला माथि भएको बहुचर्चित सामुहिक बलात्कार पछि भएको हत्याको विरोधमा हजारौँ मानिस सडकमा आएर आन्दोलन गर्दै दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेका थिए । जसका कारण बलात्कारीलाई कडा साजय र फास्ट ट्रया्क कोर्ट बनेको थियो ।
तर, पनि बलात्कारको घट्नामा कमि हुन सकेको छ्रैन । गृहमन्त्रालयद्धारा जारी गरेको वार्षिक अपराध प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा ३४ हजार उजुरी परेको र त्यसमध्ये ८५ प्रतिशतलाई जरिवाना गराएको र २७ प्रतिशतलाई कार्यवाही गरिएको छ ।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई प्रहरीले गम्भीर रुपमा लिने नगरेको र अनुसन्धानको क्रममा पनि घट्नाको संवेदनशीलतालाई हल्का रुपमा लिने गरेको महिला अधिकारवादीहरुको आरोप छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व प्रमुख ललिता कुमारमंगलमले भनिन्, एउटी महिला प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधीले मात्र परिवर्तन गर्ने छैनन् । देश अझैपनि पुरुषहरुले मात्रै चलाइरहेका छन् । अधिकांश न्यायाधीशहरु पनि पुरुष नै छन् ।
देशमा अझै पनि पर्याप्त मात्रमा फरेन्सिक ल्याबहरु नभएको र फास्ट ट्रयक अदालतमा पनि कम मात्रमा न्यायाधीश रहेको भाजपा नेता कुमारमंगलम बताउँछन् । भाजपाका पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगरद्धारा २०१७ मा एक किशोरी माथि भएको बलात्कारले सबैको ध्यानकर्षन ग¥यो जब अभियुक्तले गत वर्ष पुलिसको निष्क्रियताको आरोप लगाउँदै आत्महत्याको प्रयास ग¥यो ।
गत डिसेम्बरमा सेंगर दोषी ठहरियो । त्यसको ५ महिना अघि पिडीतको परिवार एक ट्रक दुर्घटनामा प¥यो र त्यसक्रममा पीडित युवति पनि घाइते भइन् भने उनको २ नातेदारको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनलाई सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सन् २०१५ मा सेन्टर फर ल एण्ड पोलीसी रिसर्चको एक अध्ययनका अनुसार फास्ट ट्रयक कोर्ट वास्तवमा छिटो थियो तर उच्च तहका मुद्धाहरु हेर्न पाएन । सन् २०१६ मा पार्टनरस् फर ल इन डिभिलप्मेन्ट नयाँ दिल्लीले भारतमाा अहिले पनि एउटा बलात्कारको मुद्धाको लागि औसतमा ८।५ महिना लाग्ने गरेको देखाएको थियो ।
भारतमा अहिले पनि यस्तो ठाँउ छ, जहाँ बलात्कारको उजुरी गर्न निषेध गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकले भने बलात्कार पछि हत्या भएका मुद्धाहरुलाई भने हत्याको रुपमै लिने गरेको छ ।
प्रदेश–३ नेकपा संसदीय दलको निर्णय: नाम बागमती, राजधानी हेटौडा
सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भन्छन ‘भाषाको कुनै भूगोल हुदैन’